अनिशाको देखावटी मायामा परेर मेरो छोराको आज मृ’त्यु भयो भन्दै ग्वाग्वा रोइन कन्चनको आमा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 9, 2021 AdminLeaveaComment on अनिशाको देखावटी मायामा परेर मेरो छोराको आज मृ’त्यु भयो भन्दै ग्वाग्वा रोइन कन्चनको आमा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
कन्चनको मृत्युसंगै उनका आफन्त र गाउलेहरु अनिशाको घर पुगेका छन । उनीहरुले अनिशा आफ्नो बुहारी वा कन्चनको श्रीमती भएको हुदा अनिशाले कन्चनको किरिया गर्नु पर्ने र सिउदोको सिन्दुर पखाल्नु पर्ने दावी गरेका छन् । आ.क्रोशित भएका गाउलेहरुले अनिशाको बुबालाई लछारपछार समेत गरेका छन् ।
छोराको अल्पायु मै दुखद मृ’त्यु भएपछि धुरुधुरु रुदै कन्चनका आमा मिडियामा आएकी छन । उनले आफ्नो छोराले न्याय नपाएको गुनासो पोखेकी छन ।